Magacyada TOBANKII Xiddig Ee Manchester United Ay Ku Guul-darraysatay Inay Lasoo Saxeexato Xagaagan - Gool24.Net
Magacyada TOBANKII Xiddig Ee Manchester United Ay Ku Guul-darraysatay Inay Lasoo Saxeexato Xagaagan
Jamaahiirta Manchester United waxay ku qasban yihiin inay aqbalaan in kooxdoodu ku guul-darraysatay inta badan saxeexyadii ay markii hore doonayeen oo xataa magacyadooda ay hoos kasii qorteen, kuna dhowaayeen in garamadooda ay kusoo xardhaan.
Donny van de Beek ayaa ahaa laacibka kaliya ee Manchester United ay lasoo saxeexatay illaa laga gaadhayay maalintii ugu dambaysay ee uu suuqu xidhmayay oo ay ka gaadhsiiyeen saddex laacib oo degdeg ahaa.
Alex Telles oo ay FC Porto kala soo wareegeen, Edinson Cavani oo heshiis bilaash ah ugu yimid iyo laacibka 18 jirka ah ee Amad Diallo oo ay ay kasoo iibsadeen Atalanta, soona gaadhi doona Old Trafford bisha January ayaa ah saddexda ciyaartoy ee ka daba yimid Donny van de Beek.
Manchester United ayaa ku qasbanaatay in saxeexyadan cusub ay samayso kaddib bahdilaaddii ay Tottenham ku samaysay Axaddii oo ay 6-1 ku karbaashtay iyadoo waliba joogta Old Trafford.
Guul-darradan oo keentay in lala xidhiidhiyo tababare Mauricio Pochettino oo la sheegayo in uu beddeli doono Ole Gunnar Solskjaer oo shaqada laga caydhinayo, waxa ka horreeyey toban saxeex oo ay ku fashilantay Red Devils inay lasoo saxeexato intii uu furnaa suuqa iibka ciyaartoydu.
Magacyada 10kii saxeex ee ay Manchester United ku guul-darraysatay saxeexooda xagaagan:
1. Jadon Sancho: Bartilmaameedka koowaad ee Manchester United ayuu ahaa, waxayse United ka gaabisay inay bixiso £108 milyan oo Gini Borussia Dortmund ay ku xidhay.
2. Gareth Bale: Real Madrid ayay ka dalbatay, waxaase uga hor martay Tottenham oo ugu dambayntii kaga adkaatay in heshiis amaah ah ay kula wareegto.
3. Sergio Reguilon: Difaacan bidix ayay Manchester United ka doonaysay Real Madrid, iyadoo waliba markhaati u ahayd bandhiggii uu ku muujiyey kulankii ay Sevilla kaga soo reebtay Europa League oo uu laacibkani amaah kula joogay.
Tottenham oo bixisay £23 milyan oo Gini ayaa saxeexa laacibkanna kaga adkaatay United.
4. Federico Chiesa: Manchester United ayaa da’yarkan ku darsatay liiska ciyaartoyga ay doonaysay, laakiin Fiorentina ayaa ka diidday dalab lacagtiisu hoosayso oo ay Red Devils la shir-tagtay, waxaana saxeexiisa ku guuleysatay Juventus.
5. Ben Chilwell: Chelsea ayaa Man United ku garaacday saxeexa laacibkan difaaca bidix ee Leicester City ka tirsanaan jiray.
6. Jack Grealish: Ciyaaryahannadii ugu horreeyey ee lala xidhiidhiyey United ayuu ku jiray, waxaana mararka qaarkood la sheegay in heshiis shaqsi ah ay la gaadhay, laakiin Aston Villa ayaa ku adkaysatay in £80 milyan oo Gini ay bixiso haddii ay rabto laacibkan. Ugu dambayntiina waxa uu kooxdiisa u saxeexay heshiis cusub oo shan sannadood ah.
7. James Maddison: Laacibkan 23 jirka ah ee mishiinka u ah Leicester City ayay Red Devils isku dayday inay lasoo saxeexato, balse waxa ay dhaqaajin kari weyday Foxes oo ku dhegtay xiddigeedan.
8. Kalidou Koulibaly: Kooxo badan oo doonayay ayay Manchester United ku jirtay balse cidina lama saxeexanin, waxaanu ku sugan yahay kooxdiisii Napoli.
9. Ismaila Sarr: Maalintii ugu dambaysay suuqa ayay Manchester United dalbatay Sarr, laakiin saacadda ayaa ka dhacday intii aanay waxba isla meel dhigin.
10. Ousmane Dembele: Beddelka Jadon Sancho ayay damacday Manchester United inay ka dhigto laacibkan oo ay Barcelona kaga doonaysay amaah, laakiin kooxda reer Spain ayaa kaliya doonaysay in si rasmi ah looga iibsado.